Ngingayenza ngempela imali ngezinketho kanambambili
Ngingayenza ngempela imali ngezinketho kanambambili - Imali ngezinketho
UNkulunkulu uyazi ukuthi asiphelele. Etholakala ku- jw.
Hastalarda uygulanan anestezi yöntemi ile NYHA sınıf- laması arasındaki ilişki araştırıldığında hastaların NYHA sınıflamasında derecesi arttıkça genel anestezi oranlarının. LIFUNDISANI NGEMPELA IBHAYIBHELI? Ngingayenza ngempela imali ngezinketho kanambambili. Kumele imali yenu niyiphathe njengeyebhizinisi.
UMongameli Emmerson Mnangagwa, oncintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha mhlaka 30 ngoNtulikazi, utshele umphakathi ukuthi kumele izinduna zikhankasele iZANU PF. UStrydom uthi ukuthenga akulona iphutha, inkinga iqala ekutheni bengabe besabheka ukuthi imali abanayo ikulingene yini ukuthengwa kwalokhu abakufunayo.
Enye ibona abazali bayo behlala ngokwahlukana noma behlukanisa kube kungekho engakwenza. “ Ngizoze ngisuke la ngoFebhuwari ngoba abantu bakamasipala ababeke lesi sithombe bathe bazobuya bezosishintsha.
Nokho, ulindele ukuba simthande futhi silwele ukumlalela. Ayingabi bikho imali ephuma kungaziwa ukuthi ngeyani.
Uma lokho sikwenza ngenhliziyo ephelele, singaqiniseka ukuthi nathi singakwazi ukumjabulisa uNkulunkulu. Abalandeli bebandla leZanu PF abasemhlanganweni wokukhankasela ukhetho oluzayo eChinzanga Primary School esiqintini seMutoko.
Uthe ngosuku ushutha izithombe ezingaphezu kuka- 50 okwenza enze imali elinganiselwa kuR1 000. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, chofoza lapha.
Preserver, imali yakho oyilondolozile yomhlalaphansi ihlala ingaphazamiseki futhi uphinde uthokozelele yonke imihlomulo ehlinzekwa yi- Old Mutual SuperFund Preserver. Ukusiza Intsha Yanamuhla INTSHA namuhla ikhulela ezweni ngezinye izikhathi elibonakala lesabisa.
Lokho kungadala izingxabano nokushayisana endlini. Uveze ukuthi selokhu eqale lo msebenzi ngoMsombuluko alukho olwamahhala kodwa nsuku zonke uvukela khona.
INJONGO: Hlola lokho okukholelwayo nokuthi kungani ukukholelwa, hlola nalokho okufundiswa iBhayibheli, futhi ubone ukuthi ungazichaza kanjani izinkolelo. UmbonoKaNkulunkuluNgokuphila ( Ingxenye 2) Isekelwe esahlukweni 13 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli?
I chicago ibhodi ongakhetha kukho imakethe yokushintshanisa
365 kanambambili inketho lokusebenza